प्रधानमन्त्रीज्यू ! बन्दुकको परेडभन्दा कलसको दियो शक्तिशाली हुन्छ – YesKathmandu.com
प्रधानमन्त्रीज्यू ! बन्दुकको परेडभन्दा कलसको दियो शक्तिशाली हुन्छ
विप्लवहरुले बालुवाटारको जवाफ इमरान खानको शैलीमा दिए उनीहरुको राजनीतिक र सामाजिक कद निकै माथी जाने निश्चित छ । अस्त्रलाई रोकेर, राजनीतिक शास्त्रको शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडी बढ्न सके बालुवाटार पराजय र विप्लव बिजय हुने निश्चित छ ।
एक महिनाअघि ४० जना भारतीय सैनिकको ज्यान जानेगरी कश्मीरको पुलवामा भएको आतंकबादी हमलापछि भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको बादल बडारिन थालेको थियो । दुई देशका लडाकु विमानहरु एक अर्काका सीमा रेखा क्रस गर्ने र आक्रमण गर्ने गरिरहेका बेला भारतीय लडाकु विमान पाकिस्तानी भूमिमा खसालियो र लडाकु विमानका चालक पाकिस्तानमा बन्दी बने ।
भारतले आतंकको छाँया पाकिस्तानमाथी थोपरिरहेको थियो भने पाकिस्तानले अस्वीकार गरिरहेको थियो । विश्व समुदायबाट पाकिस्तानलाई अलग गराउन भारतले गोयवल्स शैलीमा प्रचार अभियान थालेको थियो । विश्व समुदायसँग गुहार मागिरहेको थियो । त्यही बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको एक शान्ति चाल चले । इमरानको शान्ति चालका अगाडी हिंसा, आतंक र बन्दुकले घुडा टेक्यो, भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको खतरा टरयो ।
इमरान खानको शान्ति चाल थियो आफ्नै भूमिमा पक्राउ परेका भारतीय लडाकु विमानका चालकलाई सम्मानजनक रिहा । पाकिस्तानबाट आक्रमण गर्न पुगेका चालकलाई इमरान खानले माला लगाएर रिहा गरिदिए । इमरानको शान्ति चालले भारत एकाएक रक्षात्मक बन्यो । दुई देशले युद्धको जोखिम मोल्न परेन ।
इमरान खानको चाललाई विश्व समुदायबाट स्वागत गरियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि धन्यबाद दिन बाध्य भए । अस्त्रलाई शास्त्रले फेरी पनि एक पटक घुँडा टेकाएको छ । शास्त्रलाई मुल ध्ये बनाउने मोदीले पनि अस्त्रलाई रोके, शास्त्रलाई रोेजे ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इमरान खानले चालेको शान्तिको कदमबाट अनभिज्ञ छैनन् । तरपनि उनी नेपालमा शान्ति होइन, अखण्डता र युद्ध चाहिरहेका छन् । पछिल्लो समय ओली सरकारका कदम अखण्ड नेपालमा धावा र युद्धमा रमाउने खाल्का छन् ।
विखण्डनबादी चिन्तनका सिके रावतलाई सरकारी सुरक्षा दिएर खुलियाम नेपालमाथी घात गरिरहेका छन् भने फरक राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा विप्लव समुहमाथी प्रतिबन्ध लगाएका छन् । ओली सरकारका अन्य काम अलोकप्रिय त थिएन नै यी दुई कार्य राष्ट्रघाती छन् । क्षमालायक छैनन् ।
सीके रावतलाई बालुवाटारमा रातो कारपेट बिछ्याउँदै गर्दा विप्लपका हातमा बन्दुक धमाउँदैछन् । तराईका जिल्लामा नेपाल विभाजनको तानाबाना बुन्ने सीके रावतलाई सरकारी सुरक्षा दिएका छन् । सरकारी सुरक्षामै बसेर उनी स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाइरहेका छन् । नेपाल विभाजनमा ओली सरकार सारथी बनेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपालले १० बर्षेे युद्धको कालरात्री भोगेको छ । फेरी पनि युद्ध झेल्ने क्षमता नेपाल र नेपालीसँग छैन । तर बालुवाटारको ठुलो सुरक्षा घेरामा बसेका ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली जनतालाई युद्धमा धकेल्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट पक्षसँग सम्वाद गरी उनीहरुको माग सम्वोधन गर्नेतर्फ सरकार गएको छैन, बरु उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर युद्धको घोषणा गरेको छ ।
धर्म संस्कृतिको विनास, परम्परागत शैलीमाथी धावा, संघियता जस्तो बोझ बोकेको वर्तमान सरकारको नीतिप्रति राप्रपा असहमत छ । राष्ट बिघटन र देशलाई युद्धमा धकेल्ने कुचेष्टाका बिरुद्ध राप्रपा जहिले पनि उभिने प्रण गरेको छ । बालुवाटारबाटै राष्ट बिखण्डनको तानावान बुनिरहेका बेला राष्टिय स्वाभिमानी यात्रा थालिएको हो । मेचि महाकाली यात्रामा हामीले बन्दुक बोकेर हिडेनौ । किनकी हामीलाई बन्धुकको ज्वालामुखी भन्दा कलस दियो शक्तिशाली लाग्छ । अस्त्र भन्दा शास्त्रमा हाम्रो रुचि छ । त्यही भएर कलस लिएर मेची महाकाली अभियान थाल्यौ, उत्तर दक्षिण यात्रा थाल्दैछौ । बालुवाटारले देशलाई शान्तिको दियो दिनु पर्दछ, न्यायको अनुभूति गराउनु पर्दछ ।